Maxaa lagu arkaa magaalada Taliyaani ee Catania | Wararka Safarka
Catania waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan jasiiradda Talyaaniga ee Sicily wada jir ah ula Palermo. Magaaladaani waxay ku taal aagga bari, inta udhaxeysa Messina iyo Syracuse, xeebta. Waxay ku taalaa cagaha Mount Etna, oo ah volcano ugu firfircoon Yurub. Magaaladani waa UNESCO Hidaha Dunida waxayna ka mid tahay Magaalooyinka Baroque Late ee Val di Noto.
Waan arki doonaa wax kasta oo noqon kara ogaada magaalo qurux badan oo dhab ah sida Catania, kaas oo leh xididdada Giriigga iyo Roomaanka taariikhdiisa oo lagu aasay laas ilaa toddobo jeer, sidaa darteed haraadiga ilbaxnimooyin kale si buuxda looma badbaadin karin. Sidoo kale waa magaalo la yaab leh tirada badan ee baroque iyo kaniisadaha taariikhiga ah.
2 Katidralka Santa ofgata
3 Wadada Etnea
4 Qasriga Ursino
5 Masraxa Roman ee Catania
7 Dalxiis ku socda Etna
Piazza del Duomo ama cathedral, sida magaalooyin kale oo Talyaani ah, waxay ina tusaysaa barta dhexe ee magaalada. Xaaladdan oo kale waxaan ka heli doonnaa laba jibbaaran oo ay ku taal astaanta magaalada, Isha Isha Maroodiga. Maroodi lagu xardhay shaashad madow oo lagu dhejiyay qaab u eg Masaarida. Xaqiiqdii waa il aad u qurux badan. Fagaarahaan waxaa sidoo kale ku yaal dhismaha hoolka magaalada ee Palazzo deggli Elefanti iyo Fontana dell'Amenano, barta kaliya ee uu ka soo baxo Webiga Amenano, oo lagu aasay hoosta dhagaxa ka soo dillaacay qarnigii toddoba iyo tobnaad. Ishaani waa mid caan ah oo shilimaad lagu dhex tuuro. Isha agteeda waxaa kujira Palazzo dei Chierici oo kuxiran marinka loo maro Cathedral-ka Catania. Fagaaraha hoostiisa waxaa sidoo kale ku yaal dhismooyin kaamerada qaarkood, Terme Achilliane, oo marin looga maro marinka Matxafka Diocesan. Saddex waddo oo muhiim ah ayaa sidoo kale isugu soo urura fagaarahan caanka ah, Via Etnea, Via Garibaldi iyo Via Vittorio Emanuele II.
Katidralka Santa ofgata
Kaniisadani waa kan dhismaha diinta ee ugu muhiimsan magaalada waxaana dhowr jeer dib loo dhisay dhulgariirro iyo qarxinta fulkaanaha Etna. Kaniisadda asalka ahi waxay ka bilaabmaysay qarnigii XNUMXaad waxaana lagu dhisay burburka qubeysyadii hore ee Roomaanka. Ka dib dhulgariirkii qarnigii toddoba iyo tobnaad ee burburka ka tagay, dhismahan waxaa dib loogu dhisay qaabka baroque ee aan aragno.
La Via Etnea waxaa la abuuray ka dib dhulgariirkii 1693 kaasoo inbadan magaalada burburiyey. Wadadani waxay ka bilaabmaysaa Piazza del Duomo oo ay weheliso dhismayaal waxaa loo dhisay qaabkii Sicilian Baroque. Waa mid kamid ah jidadkeeda ugu muhiimsan uguna dukaamada badankood. Intaas waxaa sii dheer, wadadan waxaan ka helaynaa ilaa toddobo kaniisadood, waa inaanan ilaawin in magaaladan ay ku yaalliin tiro badan oo dhismayaal diineed ah. Waxaa jira kaniisada Minoriti, kaniisada San Biagio ama kaniisada karaamada barakaysan. Waxaan sidoo kale arki karnaa daaraha waaweyn sida Palazzo Gioeni, Palazzo San Demetrio ama Palazzo San Giuliano.
Este taariikhihii hore ee taariikhda laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad. Waa qalcad taariikh badan leh waxayna sidoo kale ka mid ahayd dhismayaasha faro ku tiriska ah ee magaalada oo dhan ka badbaaday dhulgariirkii musiibada ahaa ee qarnigii toddoba iyo tobnaad. Qasrigan wuxuu fadhi u ahaa Baarlamaanka Sisiliya sidoo kale wuxuu deganaa Frederick II ee Sicily. Maanta waxaa ku yaal matxaf dowladeed iyo gudaha farshaxan farshaxan. Waa in la yiraahdaa waa wax lala yaabo in qalcaddan ay ku taallo buur ku xigta badda laakiin qarxa Etna awgood maanta waxay hal kiilomitir u jirtaa badda.
Masraxa Roman ee Catania
Este tiyaatarka wuxuu ka bilawday qarnigii XNUMXaad ee miilaadiga. C. waxaana lagu dhisay dhagaxa dhagaxa weyn ee Etna. Godka iyo qaybo ka mid ah muuqaalka wali waa la keydiyay. Waxay u dhowdahay Piazza del Duomo laakiin waa in la sheegaa in xilligan xoogaa laga tagay oo ay ku wareegsan tahay dhismayaal badan oo adkeynaya in la ilaaliyo. Isku soo wada duuboo, waxay markhaati weyn u tahay taariikhda magaalada mudan in la booqdo.
Wadadani waxay soo bilaabatay qarnigii XNUMXaad waana mid kale oo laga arko magaalada Catania. Waxay ka bilaabataa Piazza San Francesco d'Assisi waana tusaale weyn oo ah qaab dhismeedka Baroque astaamaha magaalada ee ku kasbatay cinwaanka Goobta Dhaxalka Adduunka. Intaa waxaa dheer, jidkan waxaan ka heli doonnaa dhismayaal diimeed oo badan, oo ah nuxurka Catania. Dhexdeeda waxaad ku arki kartaa kaniisadaha sida San Benedetto, San Giuliano iyo San Francesco Borgia.
Dalxiis ku socda Etna
Haddii ay jiraan wax aanan joojin karin sameynta markaan tagno Catania waa safar ugu bax Etna. Haddii aan kaligeen tagno waxaan gaari karnaa salka Mount Etna, laakiin halkaas, si aan u booqano godka waa inaad ku tagtaa safarro hagitaan ah. Si kastaba ha noqotee, waa khibrad gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Italia » Maxaa lagu arkaa Catania
Salar de Uyuni, muuqaalka jannada ee Bolivia